China ZZ Biodegradable 8X8 Wepụta Hinged Clamshell 200 PC. Ngwa ndakwa nri, igbe a na-eburu ebugharị eburu gaa rie nri. Nnukwu oriri na ọ forụ forụ maka oriri ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ Party Were Ndị na-emepụta igbe na ndị na-eweta igbe | ZHONGSHENG
ZZ Biodegradable 8X8 Wepụta Hinged Clamshell 200 PC. Ngwa ndakwa nri, igbe a na-eburu ebugharị eburu gaa rie nri. Nnukwu oriri na ọ Carrụ forụ maka oriri ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ Party Were Igbe
Ihe adighi: PC081
Size: 205 * 205 * 40 / 65mm
Ogo katoonu: 42 * 33.5 * 21cm
Mbukota: 2 * 100pcs
EGO, LEAK-PROOF, ECO-FRIENDLY CLAMSHELL BOXES E ji akụrụngwa akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma bụ igbe ndị kachasị mma maka mkpa ị na-ebu ibu na maka mbara ala gị!
Ọ bụ ezie na arịa ndị ọzọ dị n'ụlọ oriri maka oriri a na - enweta site na mmanụ na - emerụ ụwa ma ọ bụ na osisi, anyị sitere na ebe a na - ere carbon-carbon ma si na ngwaahịa sitere na ugbo (okpete) nke a ga - atụfu. Igbe anyị a na-ejikọ ọnụ na - microwaveable (ruo 200 digiri) wee guzogide ịmịcha mmiri, ọbụlagodi maka nri dị oke oyi!
Kpamkpam! Ọ bụrụhaala na nri ị na-enye dị n'okpuru ogo 200 F, igbe ndị a agaghị emebi emebi ga-edozigharị ike ha! Nri oyi na-adị mma!
Eriri nke mejupụtara ngwa nri anyị na-esite n’uzu okpukpo a na-emezighị emebi nke a na-emegharị emezi. Igwe siri ike, nke a na-etinye aka na ya bụ ihe aka na -akwu, mana obere ikuku nwere ike ịnakọta na igbe ahụ mgbe a na-enye nri na-ekpo ọkụ n'ime ha.
Site na ị na-ahọta ihe eji eme ka ihe na-egbu egbu, ị ga-ahọrọ ụwa ga-adịgide adịgide karịa igbe akụ nwere ike ịkọ nke ị na-eri.
Nke gara aga: ZZ Biodegradable 8X8 inch 3-Compartments Wepụ Hinged Clamshell 200 PC. Ngwa ndakwa nri, igbe a na-eburu ebugharị eburu gaa rie nri. Nnukwu oriri na ọ Carrụ forụ maka oriri ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ Party Were Igbe
Osote: ZZ Biodegradable 6X6 Wepụ Hinged Clamshell Compostable Nnukwu Hinged Sanwichi & Ihe Hamburger Kwesịrị
ZZ Biodegradable Rectangle White Sugarcane / Baga…
ZZ Biodegradable 8X8 inch 3-Compartments Were O ...
ZZ Eco Ngwa 1200ml Rectangle Biodegradable ...
ZZ Eco Products SC94 Rectangle Biodegradable Ba ...